Author: Goltinris Karisar
Haddii aanu Goluhu fadhiyin, waxa waajib ah in oggolaanshaha tallaabada laga qaadayo xubinta laga helo Guddida Joogtada ah ee Golaha Wakiilada; Golahana waxa la soo hor-dhigayaa kal-fadhiga cusb.
Madaxweynaha, ka dib marka uu la tashado Golaha Xukuumadda. Haddii aftida Qaranku taageeri weydo kala diridda Golaha Wakiilada, ama doorashadu qabsoomi waydo, Golihii hore ayaa xilka haynaya.
Maxamadaha Racfaanka ee Dastuurkx 3. Ka-talo-bixinta dhalliilaha maamul ee Xukuumadda iyo ogaysiintooda Golaha Wakiilada. Waxa u fadhiisanaya xukunka eedayntaas Golaha Guurtida oo uu Guddoomiye ka yahay Guddoomiyaha Maxkamadda Sare oo dhagaysanaya dacwadda ay soo oogayaan Guddida ay igmadeen Golaha Wakiiladu, iyadoo Madaxweynahu ama Madaxweyne-ku-xigeenku isaguna yeelanayo qareemo gaar ah oo difaaca. Shuruuradaha Qofka lsu Taagaya Doorashada. Shirweynihii Dastuurka Qaran, kaasi oo isku dastjurka in ka dastuurkz ergo oo ka kala yimid dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed, ayaa billaabaya hannaan dib u eegis ah oo wax ka qaban doona dhowr arrimood oo dastuuri ah oo aan weli xal loo helin, oo ay ka dastuur,a yihiin maqaamka mustaqbalka Muqdisho iyo qaybsiga awoodaha iyo kheeyraadka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka.
Dadka diidan dastuurka cusub, waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Moi, oo isagu waddanka xukumayey 24 sanno. Dowladda Soomaaliya oo dejisay qorshayaal ay kula dagaallameyso musuqmaasuqa kuna xoojineyso isla xisaabtanka iyadoo heleysa taageero caalami.
Guddiga ku meel gaarka ee doorashada ayaa sheegaya in uu diiwaangeliyey in ka badan 12 milyan oo qof iyadoo codka laga dhiiban doono in ka badan 27 kun oo goobood. Haddli loo baahdo hay’ado kale waa la dhisi karaa si xeerka waafaqsan. Deegaanka iyo Wax-ka-qabashada Aafooyinka. Dxstuurka Xilka iyo Xilliga Doorashada. Waxyaabaha ka Reebban Madaxweynaha. Khiyaamo Qaran High Treason ama. Xildhibaano kale oo federaalka ah oo aan la hadalnay ayaa cadeeyay in ay sugayaan dastuurka la horkeeno baarlamaanka isla markaana aanay xumaan u arkin in la raaco meeshii loo bato xitaa haddii uu dalka madaxweyne ka noqonayo ruuux labo baasaboor leh.
Barashada iyo tarbiyadda Diinta lslaamku waa dariiqad asaasi ah; dhammaan heerarka waxbarashadana waa dasturka khasab, isla markaana horumarinta dugsiyada Qur’aanku waa waajib saaran Dawladda. Islaamku waa Diinta Dowladda.
Waayidda Xubinimada Golaha Wakiilada. You are here Home. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Dacwadda dembiga ah ee Iagu eedaynayo xubnaha Golayaasha waxa soo oogaya Xeer-ilaaliyaha Guud, ka dastuuurka marka Golaha xubintu ama xubnuhu ka tirsanaayeen ay maamuuska kaga xayuubiyaan saddex meelood laba ahaan tirada guud ee Golaha. Nabadgelyo iyo habsami kula dhaqanka dawladaha gobolka iyo adduunweynaha.
Wax-ka-beddelka ama bedelaadda calanka, astaanta, iyo heesta qaranka, waxa jidaynaya go’aan Golaha Wakulada. Qofna jagada Madaxweynaha ma qaban karo laba jeer wax ka badan.
Xuquuqda asaasiga ah iyo xorriyaadka qofka. Sidoo kale Madaxweynaha waxaa u bannaan in uu u wakiisho Ku-xigeenka Madaxweynaha ama Wasiir kasta ka qayb-galka fadhiyada Golaha Wakijiada. Inuu yahay xil-kas; akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisuna toosan yihiin. Ansixinta magacaabidda Guddoomiyaha Maxkamadda Sare. Xuquuqda qoraalka, hal-abuurka iyo hindisaha xeer ayaa caddaynaya.
Dhawrsanaanta Xubinta Golaha Wakiilada. Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqaya doorashada Golaha cusub bil ka hor dhammaadka muddada Golaha hore.
Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyay qaybta A ee jadwalka koowaad, waalaydi buluug furan ah oo dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh. Dastuurkan KMG ah ee ka waxaa uu ka duwan yahay dastuuradii hore marka fusub hadlayo shuruudaha doorashada Madaxweynaha dalka oo waxaa ku qoran qodobkiisa 88aad: Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka.
Maxamadaha Degmooyinka; iyo 5. Inuu ka taliyo muran kasta oo Ia xidhiidha waafaqsanaanta Dastuurka. Xubnaha Golaha Guurtida waxay yeelanayaan mushahar iyo gunno xeer qeexo.
Xeer ayaa qeexaya ciqaabta ka dhalan karta ku xad gudubkooda.
Baarlamaanka ayaa meelmarinaya sharciga sameynta dawlad-goboleedyada cusub. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska ama uu galo khiyaamo qaran.
Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha ayaa leh hab maamuuska koowaad ee Qaranka.
Inay sameeyaan cilmi-baadhis nooc kasta ha ahaadee iyagoo ka eegaya dhinaca Diinta, gaar ahaan horumarka cilmiga sayniska iyo Diinta. Dastuirka waa in ay dhiirri-gelisaa xeerna ka soo saartaa xaqa ay haweenku u leeyihiin in ay ka xoroobaan dhaqamada aan Shareecadda waafaqsanayn ee waxyeelada u leh jidhkooda iyo damurkooda.
Qof kasta waxa ku waajib ah inuu si hagar la’aan ah u bixiyo cashuurta iyo takaaliifta kale ee xeerku waajibiyey. Dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirrigelinayaa xuquuqda aadanaha, talinta sharciga, dastuurkaa guud ee xeerka caalamiga ah, cadaaladda, xukuumad loo dhan yahah oo ku dhisan wadatashi, kal-soocidda awoodaha sharcidejinta, fulinta iyo garsoor madaxbanaan oo leh hannaan ccusub dhisan la-xisaabtan iyo hufnaan oo ka jawaabaya danaha dadweynaha.
Shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu awooddaas iyo karaamadaas sida ku cad Dastuurka u igmaday dawlad ku dhisnaan doonta kuna dhaqmi doonta Dastuurka. Xilka xeer-dejintu uma wareegi karo cid ka baxsan Baarlamaanka.
Baarlamaanka iyo Fadhiyada Wada Jirka ah. Xubinta Golaha Wakijiada uma bannaana in ay qabato xii kale oo Dawladeed, iyadoo xilkii loo doortay haysa; umana bannaana inay uga faa’iideysato xilkaasi dano gaar ahaaned.
Maxamadaha ciidamadu waxay gaar u yihiin dhegaysiga dembiyada ciqaabta ee lagu oogo xubnaha ciidamada Qaranka xaaladaha nabadda iyo dagaalka. Lama xidhi karo garsoore ama ku-xigeen Xeer-ilaaliye Guud haddii aanay Guddida Cadaaladdu oggolaanin, hase yeeshee looma baahna oggolaanshaha Guddida haddii garsooraha ama Ku-xigeenka Xeer-ilaaliyaha Guud la qabto isaga oo faraha kula jira dembi ciqaabtiisa ugu yari ay tahay 3 saddex sannadood oo xadhig ah.